Yemen oo heshiis la gaaray - BBC Somali
Heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in muddo saddex maalmood gudahood ah lagu soo dhiso dowlad cusub, iyadoo fallaagada shiicada ah ee Xuutiyiinta ay soo magacaabi doonaan Ra'iisul wasaare cusub.
Heshiiska ayaa la gaaray saacado kaddib markii uu is-casilay Ra'iisul wasaarihii, iyadoo dagaalo xooggan ay ka dhaceen caasimadda.
Dhowr qof ayaa ku dhintay dagaalada, boqolaal kalana waxay ka qaxeen guryahoodii caasimadda Sanca.
Fallaagada Xuutiyiinta ayaa waxa ay qabsadeen dhowr wasaaradood oo muhiim ah iyo dhismaha warbaahinta dowladda.
Weriyaha BBC-da ayaa sheegaya in in la sameeyo dowlad cusub oo midnimo qaran, ay qeyb ka ahayd dalabaadka ay soo jeediyeen Xuutiyiinta, balse weli ma cadda in halkaas ay ku ekaan doonaan oo ay isaga bixi doonaan goobaha ay qabsadeen.
Heshiiska ayaa waxa uu ugu baaqayaa fallaagada in ay soo wareejiyaan dhismooyinka melatri iyo kuwa kale ee ay qabsadeen.
Yemen, xasilooni-darro ayaa ka jirtay tan 2011-kii, markaasi oo ay dibadbaxyo dhacay ay ku qasbeen in uu xilka ka dego madaxweynihii hore ee dalkaasi, Cali Cabdalla Saalax.
Xuutiyiinta, oo ka soo jeeda qabiilka shiicada ah ee Zaida ee laga tirada badan yahay ayaa tan iyo 2004-tii waxa ay wadeen kacdoon ay ku doonayeen in ay ku helaan xuquuq dheeraad ah, iyo in loo madaxbanaaneeyo goboladda waqooyiga ee ay ku nool yihiin.
Waxyaabaha ugu dambeeyey ee ay dalbanayeen waxaa ka mid ahaa in dowladda ay hoos u dhigto sicirka shidaalka, arrintaas oo uu ogolaaday madaxweynaha, qeybna ka ah heshiiska haatan la gaaray.